အများစုမှာ HARD DRIVE ကိုထုတ်လုပ်သူ - HARD DISK ကို - 2019
အများစုမှာ hard drive ကိုထုတ်လုပ်သူ
Microsoft က Excel ကိုပထမဦးစားပေးအလုပ်လုပ်ဖို့ table ထဲမှာတန်းစီခြင်းနှင့်ကော်လံထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင် tabular data တွေအတွက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ရဲ့ Excel ကိုတစ်ကော်လံကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
သင်ခန်းစာ: Microsoft Word ကိုစားပွဲတင်တစ်ကော်လံကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
Excel ကိုတစ်စာရွက်ပေါ်တစ်ကော်လံထည့်သွင်းဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့သော်လည်း, တစ်ဦးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူကိုချက်ချင်းအားလုံးနှင့်အတူကိုင်တွယ်လို့မရပါဘူး။ ထို့အပွငျအလိုအလျှောက်စားပွဲ၏ညာဘက်တန်းကိုထည့်သွင်းဖို့ရွေးစရာတခုရှိတယ်။
Method ကို 1: ကိုသြဒိနိတ်အတွက် panel ကမှတဆင့်ထည့်
အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုအလျားလိုက်ကိုသြဒိနိတ် Excel ကို panel ကတဆင့်စစ်ဆင်ရေးထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အလျားလိုက်ပြားသင်တစ်ဦးကော်လံထည့်သွင်းချင်လက်ဝဲရာကဏ္ဍအားဖြင့်ကော်လံများ၏အမည်များနှင့်အတူညှိနှိုင်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီကော်လံအပြည့်အဝခွဲဝေသောအခါ။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ပေါ်လာသော menu ကထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ထည့်".
နည်းလမ်း 2: တစ် Context Menu ကနေတစ်ဆင့်ဆဲလ် Add
သငျသညျအမည်ရဆဲလ်များ၏ Context Menu ကတဆင့်အတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်ဤတာဝန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
စီစဉ်ထားတဲ့ဖြည့်စွက်ကော်လံ၏ညာဘက်ကော်လံတွင်တည်ရှိသည်ဆိုဆဲလ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူကို item ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဆက်စပ်မီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ထည့် ... ".
ဤအချိန်တွင်, အများအပြင်အော်တိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအသုံးပြုသူထည့်သွင်းမယ့်အရာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်:
cell ချ shift;
ပြောင်းကုန်ပြီညာဘက်နှင့်အတူ cell ။
အနေအထားမှ switch သည်နေရာ "ကော်လံ" နှင့် button ကို click "အိုကေ".
တစ်ကော်လံကိုထည့်သွင်းရန်မျှော်လင့်သော၏လက်ဝဲရန်အကွက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ tab ကိုစဉ်တွင် "အိမ်"လာမည့်ခလုတ်ကိုမှတည်ရှိပြီးတစ်ခု inverted တြိဂံ၏ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "ထည့်" ဒီ tool box ထဲမှာ "ဆဲလ်" အဆိုပါတိပ်ပေါ်မှာ။ ဖွင့်လှစ်သောမီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "တစ်စာရွက်ပေါ်တွင်ကော်လံထည့်ပါ".
Method ကို 4: application ကို hotkey
ဒါ့အပြင်အသစ်တခုကော်လံ hotkey ၏အကူအညီနှင့်အတူထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, ဖြည့်စွက်၏ options နှစ်ခုရှိပါတယ်
သူတို့ထဲမှတစ်ဦး insertion ၏ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ သင်ကရည်ရွယ်သွင်းဧရိယာ၏ညာဘက်ဖို့အလျားလိုက် panel ကိုသြဒိနိတ်ဖို့ကဏ္ဍကို click နှင့် key combination ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ် ctrl + ++.
ထည့်သွင်းဧရိယာ၏ညာဘက်ကော်လံအတွက်မဆိုဆဲလ်ကို click လုပ်ဒုတိယ option ကိုသုံးပါရန်။ ထိုအခါကီးဘုတ်ပေါ်ကရိုက်ထည့် ctrl + ++။ အဲဒီနောကျငယ်လေးပြတင်းပေါက်ဒုတိယနည်းလမ်းသည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းဖော်ပြထားခဲ့ပြီးသောသွင်းအမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူပေါ်လာသည်။ နောက်ထပ်လုပ်ရပ်တွေကိုတိတိကျကျတူညီနေကြသည်: အကို select လုပ်ပါ "ကော်လံ" နှင့် button ကို click "အိုကေ".
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက် keyboard shortcuts
Method ကို 5: မျိုးစုံကော်လံထည့်
သငျသညျခကျြခငျြး Excel ကိုပိုမိုကော်လံထည့်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်သူကတစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင်အတွက်သီးခြားစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်အဘို့ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုတည်းအရေးယူသို့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်, မလိုအပ်ပါဘူး။
သင်ပထမဦးဆုံးထည့်သွင်းဖို့မည်မျှကော်လံအတွက် panel ကိုသြဒိနိတ်တစ်ခုအလျားလိုက်အတန်းသို့မဟုတ်ကဏ္ဍများတွင်အဖြစ်အများအပြားဆဲလ်တွေရွေးချယ်ရမည်။
ထိုအခါအခြေအနေတွင် menu ကနေဒါမှမဟုတ်ယခင်နည်းလမ်းများမှာဖော်ပြထားတဲ့ခဲ့ကြရသောပူသော့, အသုံးပြု. အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတဦးတည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ ကော်လံ၏သက်ဆိုင်ရာအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ထားသောဧရိယာ၏လက်ဝဲထညျ့သှငျးခံရဖို့။
Method ကို 6: စားပွဲ၏အဆုံးမှတစ်ဦးကော်လံထည့်သွင်း
လူအားလုံးတို့သည်နည်းလမ်းများအစအဦးမှာစားပွဲအလယ်၌ကော်လံထည့်သွင်းမှုအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ကစားပွဲ၏အဆုံးမှာကော်လံထည့်သွင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်, သို့သော်ဤကိစ္စတွင်အတွက်သင့်လျော်တဲ့ပုံစံချပေးစေရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတိုက်ရိုက်ရိပ်မိကြောင်းဒါစားပွဲ၏အဆုံးမှတစ်ဦးကော်လံကိုထည့်သွင်းဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ဒါခေါ် "Smart" စားပွဲလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တစ်ဦး "စမတ်" စားပွဲသို့လှည့်ချင်တဲ့စာရင်းဇယားအကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ပါ။
tab ကိုစဉ်တွင် "အိမ်"အဆိုပါခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စားပွဲတင်အဖြစ်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ"ဒီ tool box ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ဘယ်ဟာ "Styles" အဆိုပါတိပ်ပေါ်မှာ။ drop-down list ထဲမှာ, သင့်အကြိုက်မှစားပွဲပေါ်မှာဒီဇိုင်းစတိုင်များ၏ရှည်လျားသောစာရင်းများထဲမှရွေးချယ်ပါ။
ဤသည်ရွေးချယ်ထားသောဧရိယာ၏သြဒီနိတ်ဖော်ပြပေးသောပြတင်းပေါက်ပြီးနောက်။ သငျသညျတည်းဖြတ်ရေးလုပ်ရုံရှိသေး, အမှားတစ်ခုခုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါ။ သငျသညျဤအဆင့်မှာလုပ်ဖို့မလိုအပ်အဓိကအရာ - ကို tick setting အကြောင်းကိုသတ်မှတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် "ခေါင်းစဉ်နဲ့စားပွဲပေါ်မှာ"။ သင့်စားပွဲတစ်ဦးထုပ်ရှိပါတယ် (နှင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ထိုသို့), ဒါပေမဲ့ဒီအပိုဒ်တစ်စစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားမရရှိနိုင်, ထို့နောက်သင်က install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်. အားလုံး settings ကိုမှန်ကန်လျှင်ခလုတ်ကိုအပေါ်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
အခုတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်အချက်အလက်ပေါ်မဆိုဆဲလ်ဖြည့်ရန်လုံလောက်သည်ဤစားပွဲပေါ်မှာများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထဲမှာသစ်ကိုကော်လံ, ပါဝင်သည်နိုင်ရန်အတွက်။ ပေးထားသောဆဲလ်လည်းမရှိသည့်အတွက်ကော်လံချက်ချင်းစာရင်းပြုစုထားသောလိမ့်မည်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, စားပွဲရဲ့အလယ်၌၎င်း, အစွန်းရောက်ပ္ပံအတွက် Excel ကိုစာရွက်ပေါ်တွင်အသစ်ကကော်လံကိုထည့်သွင်းဖို့နည်းလမ်းတွေထဲကအတော်များများရှိပါတယ်။ အဖြစ်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေခဲ့ထည့်သွင်းဖို့, တကဒါခေါ် "Smart" စားပွဲပေါ်မှာဖန်တီးဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာစားပွဲပေါ်မှာ၏ညာဘက်ရန်အကွာအဝေးကိုထည့်သွင်းသောအခါဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အလိုအလျောက်အသစ်တခုကော်လံ၏ပုံစံအတွက်အထဲတွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယို Watch: An ultra-low-cost college degree. Shai Reshef (သြဂုတ်လ 2019).